Guddoomiyihii ururka haweenka gobolka Mudug oo lagu dilay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeGuddoomiyihii ururka haweenka gobolka Mudug oo lagu dilay Gaalkacyo
Marxuumad Dhudi Yuusuf Aadan oo dhaqaale ay jaaliyada Mudug u soo wakiisheen guddoonsiinaysa guddoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii ururka haweenka Gobolka Mudug ee Puntland Dhudi Yuusuf Aadan ayaa caawa lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo.
Marxuumada ayaa waxaa toogasho ku dilay koox baastoolado ku hubaysan wakhtigii maqribka kadib sida ay Puntland Mirror u xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Dhudi ayaa aad looga yaqiin magaalada Gaalkacyo iyadoo kaalin weyn ka qaadatay howlaha horumarinta iyo amaanka ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Wali lama oga cidda ka dambaysa dilkaas.
Wixii kusoo kordha warkaas dhawaan baan idiin soo gudbin doonaan.